UJosé Javier Abasolo. Udliwanondlebe nombhali wenguqulo yoqobo | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | 14/09/2021 12:00 | Udliwano-ndlebe, Ababhali, Iincwadi
Ukufota: UJosé Javier Abasolo. Iprofayile kaFacebook.
UJose Javier Abasolo (Bilbao, 1957) inoveli entsha kwintengiso, Inguqulelo yoqobo, apho abuyela kubuntu bakhe UMikel Goikoetxea Kwelinye ityala elitsha nelizwe le-cinema ngasemva. Yeyona mva nje ingqokelela elungileyo yezihloko zohlobo emnyama emva kwakhe UkuKhanya okuFileyo, i-Whitechapel Oath okanye iTomb eJerusalem, phakathi kwabaninzi. Ndiyalixabisa kakhulu ixesha lakho nobubele bakho ngokundinika oku udliwano ndlebe.
UJosé Javier Abasolo-Udliwanondlebe
UNCWADI NGOKU: Inguqulelo yoqobo yinoveli yakho entsha. Usixelela ntoni ngayo kwaye wenza njani uMikel Goikoetxea njengomcuphi wabucala?
UJOSÉ JAVIER ABASOLO: Inoveli iqala nini UGoiko uqeshwe yinkampani yemveliso ukuba ngumcebisi we ibhayisikobho oko kuthatyathwa kwezinye ulwaphulo-mthetho olwenzeke eBilbao Iminyaka engamashumi amabini eyadlulayo, oko abezindaba bakubiza ngokuba "lulwaphulo-mthetho lomnqamlezo otyunjiweyo."
Ngokomgaqo, kunjalo ngokuthula ukwamkela isithembiso, kuba yiyo Ityala kuphela elingenakusonjululwa xa wayengu-Ertzaina, kodwa kwelinye icala ucinga ukuba inokuba ithuba lokuvula kwakhona ukufihla uphando kwezinye zokubulala eziqhubeka nokumkhathaza. Nangona xa eqonda ukuba ukufana phakathi kwento eyenzekileyo kunye nefilimu (ethi endaweni yeBilbao ibekwe kwindawo elahlekileyo e-Alabama, e-USA) kukude kakhulu, akazukuwufihla umsindo wakhe.
Njengomcuphi uGoiko uqhuba kakuhle kakhulu, kuba uyakuthanda ukudlala ngemithetho yakhe kwaye akaqeqeshekanga kakuhle, kodwa ngamanye amaxesha uyaphoswa sisixhobo sokusebenza njengeqela esinokumnika sona kunye nezinye iindlela ezininzi kunokuba anaye yedwa.
JJA: Ndikhumbula ingqokelela ehlengahlengise imisebenzi yoncwadi oluqhelekileyo lwabantwana, kwaye ndakwazi ukufunda kuyo U-El Lazarillo de Tormes, uEl Cantar de Mío Cid, uDon Quixote noCorazónngu-Edmundo de Amicis. Xa ndafumanisa xa ndandimdala ukuba le yokugqibela ifakiwe kwi-Index yeCawa yeeNcwadi ezingavumelekanga, andizange ndikholelwe.
Malunga nento yokuqala endiyibhalileyo- okanye, endaweni yoko, endizame ukuyibhala-, ndicinga ukuba ibiyiyo Ukuzama kwinoveli yeparica eqokelelwe kwinkulungwane yama-XNUMX (Siza kwenza ntoni, ndingowenkulungwane edlulileyo), kodwa andiyigcini. Ngethamsanqa.
JJA: Kunzima ukuphendula, kuba inokutshintsha ngokuxhomekeke kumhla okanye kwimood yam. Kodwa njengomntu othanda uhlobo olumnyama, ndihlala ndiphinda ndifunda ii-greats ezinje URaymond Chandler okanye uDashiell Hammett. Ndiyazi ukuba kuyavakala ngathi sisihloko esikhulu, kodwa ndicinga ukuba kwesi sihloko sisihloko esisekwe kakuhle.
Ngaphandle kohlobo olumnyama, IPio Baroja. Kwaye bendilonwabele kakhulu uburharha be Indawo yokuhlala kunye UJardiel Poncela.
JJA: Njengoko benditshilo xa bendiphendula umbuzo ongaphambili, kunzima ukuwuphendula, kuba kuxhomekeke kwinto endiyifundayo okanye kwimood yam, ndingatshintsha ukusuka kolunye usuku kuye kolandelayo, kodwa mhlawumbi ngendikuthandile ukudibana nomntu ophambili wenoveli kaPío Baroja , UZalacaín umgwebi.
Ngokubhekisele kubaphi abalinganiswa endingathanda ukubenza, Ndizinzisa ezo sele ndizenzile. Hayi kuba zingcono okanye zinomdla kunabanye, kodwa ngenxa yokuba ziyinxalenye yam.
JJA: Akukho namnye ngokukodwa, nangona oko bendixelele ukuba ne-manias xa kubhalwa izandi "zoncwadi kakhulu", ndihlala nditsho njalo Ndinomnqweno wokungabinayo i-manias.
JJA: Phambi kokuba ndibhale ubukhulu becala emva kwemini nasebusuku, kodwa kuba ndithathe umhlala-phantsi Andikhethi, nawuphi na umzuzu inokuba ilungile. Ewe ndizama ukufumana ixesha lokuyenza yonke imihla. Kwaye kuba andikuthandi ukuzihlukanisa, kwaye andimiselanga ofisi ekhayeni lam ndedwa, Ndidla ngokuthatha ilaptop yam ndiyise kwigumbi lokuhlala. Xa abantwana bam bebancinci bendiqhela ukubhala phakathi kwengxolo abayenzayo xa bedlala kwaye bendiziqhelanisa nayo ngaphandle kwengxaki. Ngoku ndiyiphosile nangexesha lokubhalwa.
JJA: Andiqondi ukuba kukho iintlobo ezintle okanye ezimbi, kodwa iinoveli ezintle nezingalunganga, nokuba zithini na ekungaxelwa kuzo, kodwa kuba andikhathali ukuba manzi kufuneka ndivume ukuba ndinayo ubuthathaka kwinzululwazi (Bendihlala ndinguAsimovian kakhulu) kwaye kuye uhlobo lwembaliKodwa hayi kulowo uthetha ngookumkani abakhulu kunye neenjengele, kodwa kulowo ugxila kakhulu "kwabagulayo" kwimbali.
JJA: En Basque Ndiyafunda kwakhona Greta, de UJason osoro, inoveli enomdla kakhulu endicinga ukuba ayiguqulelwanga kwisiCastilian, ngelishwa. Kwaye ngaphakathi IsiCastilian Ndiqalile ukufunda Ukubaleka ebusukunguTomas Ukohlwaya, endiyifumene kwiveki yokugqibela eMnyama eGijon. Yincwadi yenoveli ebendingayazi kwaye yapapashwa kwingqokelela yeJúcar kwingqokelela yeLebhu eMnyama, eyenza ukuzithemba kum.
Ngokubhala, ngaphezu kokubhala ndinguye ukuthatha amanqaku kwinoveli endifuna ukuyibeka eBilbao, ngexesha leMfazwe yamakhaya, kwiintsuku ezimbalwa ngaphambi kokuba imikhosi kaFranco ingene edolophini.
JJA: Inyani yile Andazi kakhulu kwezo zinto. Iminyaka emininzi ndiye ndapapasha izindlu ezimbini zokupapasha zaseBasque, ikakhulu e-EREIN nakwi-TXERTOA, nangona kule ingena manqaphanqapha. Ukusukela oko bandinyamezelayo kwaye baqhubeka nokundithemba, kufuneka ndicinge ukuba umbono uqinisekile.
Kwaye ngokuthetha ngokubanzi, kubonakala ngathi ipapashwa kakhulu, ethi yona ineentsingiselo ezilungileyo, nangona ndifumana umbono wokuba kule yokugqibela ayinguye wonke umntu ovumelana nam. Kwaye, ngayo yonke intlonipho efanelekileyo, ndicinga ukuba eso sisikhundla esingalunganga, kuba umgangatho uhlala uvela kubungakanani.
JJA: Ndicinga ukuba kunzima njengakubemi bonke babemi. Ngethamsanqa, phakathi kwabantu abasondeleyo kum, khange kubekho zingxaki zinzima ngenxa yesikhokhelo, kodwa oku akukapheli kufuneka siqhubeke ukugcina izilumkiso, nangona kugonyo kubonakala ngathi siqala ukushiya itonela.
Ngokubhekisele ekubeni ndigcina into elungileyo ukubhala ibali, okwangoku ndiza kulishiya lidlule, Anditsaleleki ekubhaleni ngobhubhane, nangona ungeke wazi ukuba ikamva likuphatheleni, ngenxa yoko nam andikukhethi oko.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Udliwano-ndlebe » UJosé Javier Abasolo. Udliwanondlebe nombhali weNgxelo yoqobo